संखुवासभा समाज बेलायत नयाँ पुस्ताका लागि प्रेरक हुनेछ
बसुन्धरा याक्खा राई, अध्यक्ष संखुवासभा समाज बेलायत
संखुवासभा समाज बेलायतको छैटौं महाधिवेशनमा निर्वाचित अध्यक्ष बसुन्धरा याक्खा राई यतिबेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चामा छिन् । उनको चर्चा कुनै युद्ध मैदानमा अभूतपूर्व विरता र कसैको आडको शक्तिका कारण होइन । समाजका लागि अहोरात्र खटिरहेकी याक्खा राईका अनुभूतिलाई बेलायती प्रवासीहरुले उतारेका कारण आज उनी चर्चामा छिन् । संखुवासभा माम्लिङ माइतीघर, चैनपुर नगरपालिका–८, चापाभैं घर भएकी याक्खा राईले वि.सं. २०४२ मा मादी माध्यमिक विद्यालयबाट प्रवेशिका उत्तीर्ण भएलगतै बेलायती गोर्खा सैनिक खगेन्द्र याक्खा राईसँग हङकङतर्फ पल्टने जीवनका लागि प्रस्थान गरेकी थिइन् । एउटा नयाँ प्रकारको साथै रमाइलो पल्टने जीवनको अनुभव बटुल्दै स्वदेश फर्किएपछि उनले उच्च शिक्षाको क्रममा पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस, बागबजार, काठमाडौंबाट वि.सं २०५१मा प्रवीणता प्रमाण–पत्र अध्ययन सकिन् । याक्खा राई विद्यार्थी जीवनदेखि नै सामाजिक संघसंस्थामा सक्रिय, उनले किरात याक्खा छुम्मा नेपाल, गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ, आदिवासी जनजाति महासंघ, गैरआवासीय नेपाली संघजस्तामा आबद्ध भएर समाज सेवामा निरन्तर लागिरहेकी छन् ।
वास्तवमा कहिले पनि फर्केर आउन नसक्ने हरेक दिनहरु मानवजीवनका निम्ति अमूल्य हुन्छन् । ती अमूल्य विगतहरुलाई एउटा शिक्षाको रुपमा समाजका निम्ति अध्यक्ष बसुन्धराले हरेक समाजलाई दिइरहेकी छन् । जसरी एउटा बन्दुकबाट छुटेको गोलीहरु फिर्ता आउँदैनन्, जीवनको महत्वपूर्ण पानाहरु पनि एउटा अध्यायमा पुगेपछि फेरि फर्काउन सकिँदैन । केवल निशानालाई ताकेर जीवन अघि बढिरहन्छ ।
जीवनमा झन्डै तीनदशक सामाजिक सेवामा जीवन बिताइसकेकी याक्खा राईले क्षेत्रीय संगठन, संघसंस्था र संगठनको गाँठी कुरा यसरी व्यक्त गरेकी छन् । सायद उनका समाजप्रतिको सहयोग र देनका कारण अत्यधिक सदस्यहरुका मन जितेर अध्यक्ष पद हासिल गर्न दुई मत नहोला । उनका मनबाट प्रस्तुत भएका संवाद, बिम्ब, प्रतीकहरुले नेपाली समाजमा संस्थाप्रतिको रंगीन सपनालाई एउटा क्यानभासको रुपमा प्रस्तुत गरेकी छन् । अध्यक्ष बसुन्धरा याक्खा राईसँग एभरेष्ट टाइम्सका लागि रोशन मेवाहाङ्गले गरेको कुराकानी ।
संखुवासभा समाज बेलायतका लागि कसरी छनोट हुनुभयो ?
संखुवासभा समाज बेलायतका लागि छनोट हुन्छु भन्ने मैले सोचेकी थिइनँ । निर्वाचन आयोगले मनोनयन भएको घोषणा गर्दा खुसीसँगै जिम्मेवारी थप भएको महसुस भयो । समाज मेरो मात्र होइन्, हामी हरेक प्रवासमा रहेका संखुवासभालीहरुको भन्न चाहन्छु । यो संस्था ‘संखुवासभा समाज बेलायत’मा रहेका हरेक जिल्लावासीहरुको आशीर्वाद ठान्दछु । हरेक नेपालीको प्रेम र संखुवासभा समाज बेलायतको उदारताबाट उत्पन्न भएको त्रिवेणी खोला हो । यो त्रिवेणी नदी जस्तै सरल प्रवाहमा बगिरहेको छ । मेरो श्रीमान् सैनिक पेसामा रहेर पनि मलाई अनेकौ क्षेत्रका सफल मानिसलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका मिल्नुमा उहाँको ठूलो भूमिका रहेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । संखुवासभा समाज बेलायतप्रति म धेरै आभारी छु ।
समाजसेवामा लाग्ने उत्प्रेरण कहाँबाट पाउनुभयो ?
सर्वप्रथम त, मेरो माइतीघर र घरको पारिवारिक पृष्ठभूमि नै सामाजिक साथै राजनीतिक सेवामा संखुवासभामा लामो समयदेखि आवद्ध भएकोले मलाई समाज सेवा गर्ने प्रेरणा मिलेको हो । तर, समाजसेवा आफंैमा त्यति सहज हुँदैन जसमा धेरै आफ्ना व्यक्तिगत दैनिकीलाई पनि सन्तुलन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । जसकारण यसरी सामाजिक सेवा गर्नु पर्दा पारिवारिक समर्थनको आवश्यकता पर्दछ जुन कुरा मेरो श्रीमान् साथै छोराहरुबाट पाएकी छु । बेलायती सरकारबाट भूपू सैनिकहरुलाई बेलायतको आवासीय भिसा दिन सुरु गरेपश्चात् म परिवारसहित सन् २००६ मा बेलायत आएपछि सामाजिक सेवामा निरन्तर लागिरहेकोले आज समाजले अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी दिएको छ ।
संखुवासभा समाज, बेलायतमा किन चर्चामा छ ?
छोटो समयमै हाम्रो समाजले बेलायतमा धेरै सामाजिक कार्य ग¥यो तसर्थ पनि अलिक चर्चामै सुनिन्छ । बेलायतमा रहेका संखुवासभालीहरुले छोटो अवधिमै नेपाली समाजका लागि गौरवमय इतिहास निर्माण गरिसकेका छन् । यो दुनियाँमा संखुवासभालीले बेग्लै इतिहास र पहिचान बनाएका छौं । गौरवमय इतिहासको एउटा पाटो हो यो संस्था । यो संगठन नयाँ पुस्ताका लागि प्रेरक हुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु । हरेक नेपाली समाजका लागि गौरवमय इतिहासको दस्तावेज पनि हो । प्रवासमा रहेर पनि आफ्नो जिल्लाको प्रवासी अध्यक्ष बन्न पाउँदा ज्यादै खुसी छु ।
यस संस्थाका लागि तपाईका अगामी योजना के छन् ?
समाज परिवर्तनको लागि हरेक व्यक्तिले कुनै न कुनै कोणबाट सकरात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् । तिनै असल ब्यक्तिहरु जीवनको अनन्तसम्म मूलभूत दर्शन बन्दै चम्किलो तारा बनी चम्किरहन्छन् । संखुवासभा समाज बेलायत स्थापना हुनुको मुख्य कारण, पहिलो बेलायतवासी संखुवसभालीहरुमाझ आपतविपदका घडिमा सहयोग साथै भाषा संस्कृतिको संरक्षण संवद्र्धन गर्ने ।
दोस्रो, आफ्नो गृहजिल्लाको समुन्नत विकास तथा समृद्धि गर्नु नै हो । यही उद्देश्यमा रही हाम्रो जैविक, सांस्कृतिक साथै प्राकृतिक विविधताले भरीपूर्ण सुन्दर जिल्लामा शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रमा विकासका लागि, बेलायत मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय पहलको आवश्यक छ ।
संखुवासभा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का संयोजक गणेश रानाजीको पहलमा परिषद्को विस्तार हुनेछ । सो विकासको कार्यक्रम सफल गर्न संखुवासभा समाज बेलायतले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछ ।
अन्त्यमा आफ्ना जिल्लावासी र नेपालीहरुलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
सबै समाजसेवीहरु उत्तिकै जादुमय हुँदैन् ताकि समाजलाई उत्तिकै भावुक बनाउन सकोस् । करिब तीन दशक मैले समाजलाई गरेको योगदानको मूल्यांकन गरेर मलाई ‘संखुवासभा समाज बेलायत’को अध्यक्षमा चयन गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण संखुवासभा समाज बेलायत र संसारभर छरिएर रहनुभएका नेपालीहरु र मैले भुल्नै नहुने नवनिर्वाचित सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुलाईहार्दिक शुभकामना भन्दै उहाँहरुका अतुलनीय सहयोग र प्रोत्साहन मेरो कार्यकालभरी रहिरहने छ भन्ने ठूलो आशा लिएकी छु ।